umatshini wokusika amaxabiso aphantsi uyathengisa eIndiya,Phakistan,Khenya,kolkata
umsiki wexabiso eliphantsi wentlawulelo ngumatshini osetyenziselwa ukusika umququ wombala omncinci-oluhlaza, umququ wombila owomileyo, ingca yerayisi kunye nezinye izityalo ezityayo,ingca kunye necuba, ingca yengqolowa, ingca yombona, umtshana corm umququ, isiqu seetapile, imbotyi, ingqolowa yengqolowa kunye nezinto ezahlukeneyo ze biomass.
Ezi zixhobo zityumkileyo zisetyenziswa kakhulu ekutyiseni izilwanyana.Zilungele ukufuya iinkomo kunye neegusha, Ixhama,ihashe njl. Isetyenziselwa ukunyanzela amabele,umbona,ingqolowa,njl.
Ngophuhliso lweelali kunye needolophu kwilizwe lethu, ishishini lethu lokufuya imfuyo nalo lifumene ukukhula ngokukhawuleza, emva kokuvuna, ezinye izityalo zidlula phakathi Umsiki weChaff osikiweyo kwaye emva koko usike, zize ke iinkomo kunye neegusha zitye, kondla izilwanyana ezinjengeenkomo kunye neegusha ezizakusetyenziswa, ukuphatha ngexesha elifanelekileyo umatshini omkhulu we-ensilage, thintela ingca yokutsha okungcolileyo kwendalo esingqongileyo, kunye nomhlaba omkhulu, yongeza imixholo yomhlaba ojikeleze umhlaba, phucula ukwakhiwa komhlaba, ukuchuma komhlaba, ukuphucula izityalo kwindlela entsha, ukunciphisa ungcoliseko lwendalo.
Umsiki weChaff idityaniswa ikakhulu ngesixhobo sokondla, isixhobo sokuhambisa, isixhobo sokondla, Umsiki, isixhobo sokutyhoboza, isixhobo sokucoca, isixhobo sokuphosa, isixhobo sokuhamba, isixhobo esikhuselayo, isixhobo sokurhweba kunye nokunye. Umsiki weStraw ngowomntu osisitsala-phantsi osisicoci esineenjongo ezininzi, usike umdaka owomileyo, qing ukugcinwa kwe-hay Cutter, Umsiki wengca yokusika kunye nezinye izixhobo zokusika kunye nezixhobo zokuxhuma, Ngaba luphando olufanelekileyo kumafama uChaff Cutter, ukuba amafama asombulule ingxaki yenkunkuma.